Nifarana androany ny « Fikaonandoham-pirenena momba ny fananan-tany » izay natao teto amin’ny CCI Ivato.
Fikaonandoham-pirene­na momba ny fananantany.
Avis de Concours ENMG 2022
Published Date: 25 mai 2022
👉Cliquer ici pour accéder à la page « avis de concours 2022 ».👈
Published Date: 20 juin 2022
📸 Pejy an-tsary 20 Jona 2022.
🇲🇬 FANANGANAN-TSAINA TETO AMIN’NY MINISTERAN’NY FITSARANA.
📌 Amin’izao ankatoky ny fetim-pirenena izao dia nanentana ny besinimaro ny Sekretera Jeneraly, R/­toa RABY Savatsarah nandritra ny fandraisany fitenenana fa ilaina ny fananganana ny sainam-pirenena isaky ny tokantrano ho mariky ny fiandrianam-pirenena sy fiarahana mankalaza ny faha-62 taonan’ny niverenan’ny Fahaleovan-tenan’ny Madagasikara.
FANAPARIAHANA LALANA SY PAIK’ADY ARA-PITSARANA.
⚖️ FANAPARIAHANA LALANA SY PAIK’ADY ARA-PITSARANA :
📌 Ho tohin’ny fifampizarana mikasika ny lohahevitra : FIAHIANA NY ZAZA na « TUTELLE » dia indro entina amintsika indray ny mahakasika ny fanendrena ny mpiahy na « tuteur » sy ny andraikitra miandry azy.
🔷 AHOANA NY FANENDRENA NY MPIAHY na TUTEUR ?
👉 Amin’ny alalan’ny didim-pananana (testament) na fanambarana natao teo anatrehan’ny notera izay nataon’izay maty farany tamin’ny ray na ny reny na ihany koa ny reny ho an’ny fianakaviana tsy misy ray,
👉 Amin’ny alalan’ny filan-kevitry ny fianakaviana izay fidian’ny Fitsarana (paikady ara-pitsarana)
Azon’ny olon-drehetra atao ny mampilaza amin’ny Filohan’ny Fitsarana ny amin’ny ilàna fanendrena mpiahy.
🔷 FITSARANA MAHEFA :
Fitsarana Ambaratonga Voalohany ao amin’ny toeram-ponenan’ny zaza.
🔷ANDRAIKITRY NY MPIAHY :
👉 Miandraikitra ny tenan’ilay zaza,
👉 Misolotena azy ara-panjakana,
👉 Mitantana ny fananany toy ny raim-pianakaviana mendrika ary tomponandraikitra amin’izany fitantanana izany,
👉 Tsy mahazo mandefa maimaimpoana ny fananana manokan’ilay zaza na milatsaka ho mpividy ny fananany,
👉 Tsy mahazo mivarotra ny fanana-mitoetran’ilay zaza na « biens immobiliers » raha tsy mahazo alalana avy amin’ny Filohan’ny Fitsarana,
👉 Maimaimpoana ny fiahiana ary voatokana ho an’izay voatendry ihany fa tsy azony afindra amin’ny vadiny na ny mpandova azy.
Ny Sampandraharahan’ny Fanapariahana Lalàna eo anivon’ny Foibem-pitondrana momba ny Fandinihina sy Fanavaozana Lalàna.
Fivoriana faharoan’ny Komitin’ny Fitantanana ny Fandaharanasa Fanohanana ny Sehatry ny Fonja Malagasy « FANARENANA »
Published Date: 14 juin 2022
Pejy an-tsary 14 Jona 2022
Fanohanan’ny firenena Frantsay, amin’ny alalan’ny AFD (Agence Française de Développement) ny Ministeran’ny Fitsarana sy ny fiarahamonim-pirenena mahakasika ny fanatsarana ny fari-piainan’ireo voafonja, ny famerenana azy eo anivon’ny fiaraha-monina ary ny zava-misy iainan’ny mpiasan’ny fonja eto Madagasikara amin’ny sehatry ny asa.
Notanterahina androany 14 Jona 2022 tato amin’ny tranom-bokin’ny Ministeran’ny Fitsarana ny fivoriana faharoan’ny Komitin’ny Fitantanana ny Fandaharanasa Fanohanana ny Sehatry ny Fonja Malagasy « FANARENANA », notarihin-dRamatoa Sekretera Jeneralin’ny Ministeran’ny Fitsarana RABY Savatsarah Gabrielle. Ity fihaonana ity dia nahitana ny fandraisa’anjaran’ny tompon’andraikitra eo anivon’ny fiadidiana ny fonja foibe sy ny isam-paritra, ny solontena avy amin’ny Ministeran’ny Fambolena, ny Ministeran’ny Rano, ny Fanadiovana sy ny Fidiovana, ny Ministeran’ny Fampianarana Teknika sy ny Fanofanana arak’Asa, ny Ministeran’ny Fahasalam-bahoaka, ary koa ny fikambanan’ny Fiarahamonim-pirenena izay arafitr’ireo tompon’ny tetikasa. Ity fandraisan’anjara ity dia manatanteraka ny fifampidinihana napetraka ao amin’ny FANARENANA, miaraka amin’ireo ministera hafa voakasik’izany.
➡ Niompana indrindra tamin’ny fankasitrahana ny hetsika natao hatramin’izay sy ny famaritana ny paikady hironana ary ny fomba fijery ho an’ny tapany faharoa amin’ny taona ny fandaharam-potoana.
Tatitra COPIL FAMERENANA 2022
Published Date: 10 juin 2022
📸 Pejy an-tsary 10 Jona 2022.
📌Nifarana androany ny « Fikaonandoham-pirenena momba ny fananan-tany » izay natao teto amin’ny CCI Ivato.
✅ Naharitra hatelona ny fikaonandoham-pirenena ary nahatratra 600 ireo mpandray anjara avy amin’ny lafivalon’ny Nosy.
Nafana ny fandraisan’anjaran’ny tsirairay ary tratra ny tanjona ny amin’ny fitadiavana vahaolana amin’ireo olana mitranga amin’ny vahoaka Malagasy amin’ny resaka ady tany sy fananan-tany.
🔴Araka ny baikon’ny Filoham-pirenena Andry RAJOELINA dia ho tanterahana avy hatrany ny sasany amin’ireo VAHAOLANA.
Ilain’ny vahoaka ny vokatra azo tsapain-tànana.
➡ Nandritra ny fandraisam-pitenenan’ny Mpitahiry ny Tombokasem-panjakana, Ministry ny Fitsarana, A/toa RAKOTOZAFY François dia nanamafy sy nanatintratintra izy fa ny Fitsarana dia vonona hanantanteraka ireo vahaolana izay tandrify azy.
🔺 Efa Betsaka ireo vina napetraka, indrindra fa ny Fitsarana manakaiky vahoaka sy ny ady amin’ny kolikoly amin’ny fametrahana ny « e-justice » mba hisian’ny fangaraharahana. Maro ireo soso-kevitra naroso mba hampandrosoana sy hanafainganana ny asam-pitsarana, ohatra ny fanamboarana fotodrafitrasa vaovao, fanitarana ny efi-trano fiasana, ary ny fampitomboana ny isan’ireo mpianatra ho mpitsara sy mpirakidraharaha.
Ho tanterahana matetika ny fidinana ifotony amin’ny fampahalalàna sy Fampahafantarana ny lalàna sy ireo paikady rehetra tokony ho fantatra ny vahoaka.
⭕ Manainga ireo ratsa-mangaika rehetra hiara-misalahy aminy ny Ministeran’ny Fitsarana hanatrarana ny tanjona iombonana.